Fiitamiin Dabiici E Ve Softgel GMP La Xaqiijiyay
[Faahfaahin:] 500mg / 1000mg / 450mg
[Nolosha shelf:] 2 sano
[Kaydinta:] Ku hay meel qabow oo qabow, heerkulku kama badnaan 25 Centigrade, qoyaanka qiyaastii waa 50%.
[Isticmaalka la soo jeediyey:] Qaado laba jilicsan maalin kasta raashin diiran.
Faytamiin E dabiici ah ayaa ah kan ugu muhiimsan ee ka hortaga gabowga. Waxay dib u dhigtaa gabowga waxayna ilaalisaa firfircoonida cagaaran. Tijaabooyin la sameeyay ayaa muujiyay in unugyada aadanuhu ay tarmi karaan waxna qeybin karaan 50 jeer oo ay dhiman karaan. Unugyada lagu daaweeyo fiitamiin E waxay kala qaybin karaan in ka badan 120 jeer, nolosha unuggana waa la dheereyn karaa 2.4 jeer. Sidaa darteed, gabowgu wuxuu ku daahmi karaa 2.4 jeer macaashka.
2. Kor u qaadista shaqada taranka haweenka
Summad wanaagsan oo fiitamiin E dabiici ah ayaa sidoo kale loo yaqaan phenol. Dadku waxay ka maqan yihiin fiitamiin E, mana aha wax fudud oo ay bacrimiyaan ama sababaan ilmo soo ridid.
Faytamiin E wuxuu xoojin karaa shaqada ugxan sidaha wuxuuna kordhin karaa duleelka jirka.
Xaqiiqdii, haweenku waxay sameyn karaan dheecaan fara badan oo gonadotropin ah waxayna kordhin karaan dheecaanka, sidaas darteed haddii aad rabto inaad hesho gabar caafimaad qabta, waa inaad u qabataa si ay u kabto fiitamiin E-ga dabiiciga ah.
3. Ka takhalusida xagjirnimada xorta ah
Inta lagu guda jiro dheef-shiid kiimikaadka jirka, noocyo kala duwan oo xagjirnimo lacag la’aan ah ayaa la sameeyaa. Kuwaas waxaa ka mid ah, boqolkiiba 95% xag-jiryada oksijiinta ee xag-jirrada xorta ah waxyeello ayey nagu yihiin. Waxay weeraraan unugyada soo saara oksaydh, waxay baabi'iyaan shaqooyinka unugyada, waxayna yareeyaan firfircoonaanta jirka. Faytamiin E dabiici ah wajiga, qabashada xagjirka ah ee bilaashka ah ee dabiiciga ah ayaa ah tan ugu toosan xagjirnimada xorta ah. Ka hor intaanay xag-jiriintu bilaabin inay weeraraan unugyada, waxay marka hore la falgalayaan xag-jiriyeyaasha bilaashka ah. Wuxuu ku falcelinayaa dardaaranka, taas oo meesha ka saaraysa nabaad-guurka xagjirnimada xorta ah ee unugyada aadanaha.
4. Ka reebida meesha caddeysa
Adeegsiga sumcadda tayo sare leh ee fiitamiin E ayaa soo celin kara gabowgii maqaarka kana dhigaya maqaarka mid siman oo caddaalad ah. Waxay ahayd mid wax ku ool ah goobta, waxaana jiray warbixino gudaha iyo dibadda ah: qaadashada fitamiin E oo joogto ah 3 ilaa 9 bilood (100 ilaa 200 mg oo VE dabiici ah maalintii) hadal ahaan) waxay yareyn kartaa wajiga melasma iyo xitaa korsashada, iyadoo leh qiime waxtar leh oo ah 70 ilaa 90%. Baba cad oo faa'iido leh fitamiin E dabiici ah ayaa loo isticmaali karaa marka lagu daro jelladaha afka laga qaato si loogu daro saamaynta gudaha iyo dibedda.
5. Dhallinyarada Wadnaha
Dhawaan, ereygu wuxuu badanaa ka muuqdaa warbaahinta atherosclerotic, oo sidoo kale loo yaqaanno burooyinka xididdada dhiigga, kuwaas oo si fudud u sameeya xinjirowga dhiigga, keena dhammaan xannuunnada iyo istaroogga, waana sababta ugu weyn ee cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga sida cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga. Faytamiin E wuxuu ka hortagi karaa xinjirowga dhiigga ee xididdada dhiigga, wuxuu ka hortagi karaa arteriosclerosis, taasoo markaa ka dhigaysa wareegga dhiigga mid wanaagsan oo looga hortagayo cudurrada dhallinyarada iyo xididdada dhiigga.
Si saraaxad leh, fitamiin E kaliya uma fiicna dumarka laakiin sidoo kale ragga. Jenna Mi oo ka socota Jaamacadda Helsinki, Finland. Dr. Para iyo asxaabtiisuba waxay daabaceen daraasad ay soo saareen bishii Oktoobar ee joornaalka neerfaha, taas oo sheegaysay in ragga qaba cudurka macaanka iyo wadna xanuunka ay ka faa’iideysan karaan fitamiin E.
Dhinaca kale, raggu waxay u baahan yihiin fiitamiin E badan si looga takhaluso xagjirnimada bilaashka ah, sidoo kale.